စစ်ပြေးဒုက္ခသည် TB နှင့် HIV ဝေဒနာသည်များ ဆေးဝါးလိုအပ်နေ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > စစ်ပြေးဒုက္ခသည် TB နှင့် HIV ဝေဒနာသည်များ ဆေးဝါးလိုအပ်နေ
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် TB နှင့် HIV ဝေဒနာသည်များ ဆေးဝါးလိုအပ်နေ	ဖနိဒါ	| ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၄ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် အဆုတ် TB ရောဂါနှင့် HIV/AIDS နှင့် နေထိုင်သူများအတွက် ဆေးဝါး ပြတ်လတ်သည့် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု စခန်းအတွင်းဆေးဝါးကုသမှု တာဝန်ယူနေသူက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လမှ မေလထိ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့(AZG) က ၎င်းလူနာများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပြီးဆေးဝါးပေးခဲ့သော်လည်း ဇွန်လမှ ယနေ့ထိ ယင်းအဖွဲ့လည်း ဆေးဝါးလာရောက်ပေးပို့ခြင်း မရှိတော့သဖြင့် လိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ “AZG က မေလ ၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးလာပြီး မလာတော့ဘူး။ ခု ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူတွေက အဲဒီကို မသွားနိုင်ဘူး။ AZG ကို ကျနော် မေးကြည့်တော့ အခက်အခဲတွေရှိလို့ မလာနိုင်ဘူးလို့ဘဲ ပြောတယ်။ ခုလောလောဆယ် ဆေး လိုအပ် တယ်၊ အာဟာရ လိုတယ်။ အားလုံးလိုနေတာက အနွေးထည်တွေ လိုအပ်နေတယ်” ဟု ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၏ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆရာ ကိုယော်ထုံ က ပြောသည်။လေးလခန့်ကြာ ဆေးဝါး ပြတ်တောက်ခဲ့သဖြင့် TB ရောဂါခံစားနေရသူ တဦးနှင့် HIV/AIDS နှင့် နေထိုင်သူ တဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲ မိုင်ဂျာယန်မြို့ရှိ ဇိုင်းအောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် TB ရောဂါ ခံစားနေရသူ ၂၂ ဦးရှိပြီး HIV ရောဂါပိုးနှင့်နေထိုင်သူ ၁၁ ဦး ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဝေဒနာရှင်များသည် ယခင်က မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့များတွင် အခြေစိုက် AZG အဖွဲ့ထံမှ ဆေးဝါးများကို ပုံမှန် သွားရောက် သောက်သုံးနေရသော်လည်း စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရ လုံခြုံမှု မရှိ၍ဆေးဝါး သွားရောက်ယူနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သာမန်ဆေးဝါးများ ဖြစ်သော ဝမ်းကိုက်ပျောက်ဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေးနှင့် အသည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆေးဝါးများ လည်း ပြတ်လတ်မှု ရှိနေသည်ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ ဇိုင်းအောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂,၃ဝဝ ကျော် ခိုလှုံနေထိုင်နေပြီး တနေ့လျှင် လူနာ ၂ဝ ဦးခန့် လာရောက် ဆေးဝါးကုသနေသည်။ KIO ဘက်က ဆေးဝါးထောက်ပံ့ပေးနေသော်လည်း လုံလောက်မှု မရှိ၍ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကလည်း အနည်းငယ်ထောက်ပံ့မှု ရရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် လုံလောက်သည့် ဆေးဝါး မရရှိသေးပေ။အလားတူ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မှတ်တိုင် ၆ ရှိ ဖရဲဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း ကလေးငယ်များ ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးရန် လိုအပ်နေသော်လည်း မသွားနိုင်သေးကြောင်း KIO ၏ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် များ စောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်ခံ အရပ်ဘက်အရာရှိ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။ “ပန်ဝါအထက် ဖရဲစခန်းမှာ မှတ်တိုင် ၆ မှာ။ ၇ဝဝ ကျော်ရှိတယ်။ ခုတလောက ၁ ဦးနှစ်ဦးဘဲ ဖြစ်တာ ခုတော့ ၁ဝ ဦးလောက်ဖြစ်လာတော့ ပြန့်လာတယ်။ ဒါကြောင့် အမြန်ဆုံးသွားပြီ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်”ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အများစုမှာ နာစေး၊ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါများ ခံစားနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
လိုင်ဇာသွား ကုလအဖွဲ့များ လုံခြုံရေးကြောင့် ကြန့်ကြာနေ	ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ကုလအကူအညီ ယနေ့ည ဖားကန့်မြို့သို့ ရောက်မည်	မတရားသင်းပုဒ်မဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသူ ကချင် နှစ်ဦးကို ဖောက်ခွဲမှုဖြင့် ထပ်စွဲ	သုခရိပ်မြုံ HIV ကလေးငယ်များအတွက် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ ကျင်းပ	ကချင် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်က မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေး တနိုင်ငံလုံး ဟောပြောမည်	ဒေါ်စုအား မိုင်ဂျာယန်သို့ လာရောက်ရန် ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖိတ်ခေါ်	စရဖ နှင့် စစ်ကြောင်း၏ ညှဉ်းပန်းမှု သမ္မတထံ မိသားစု တိုင်ကြား	Who is Online
We have 46 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved